कतिसम्म पुग्ला निफ्राको सेयर मूल्य, अब बेच्ने कि किन्ने? :: कमल नेपाल :: Setopati
कतिसम्म पुग्ला निफ्राको सेयर मूल्य, अब बेच्ने कि किन्ने?
खरिद गर्नेतर्फ अझै पनि ठूलो चाप देखिएकाले कम्पनीको मूल्य केही दिन बढ्न सक्ने देखिन्छ। बिहीबारको 'मार्केट डेप्थ' हेर्दा बजार बन्द हुने बेला सेयर खरिदतर्फ १५ लाख कित्ता अर्डर देखिन्थ्यो भने बेच्नेतर्फ कोही थिएनन्।
लगानीकर्ता पिताम्बर शर्मा खरेल भन्छन्, 'अहिलेसम्म माग अत्यधिक भएकाले नै बजार बढेको हो। अझै पनि सेयरको माग देखिएकाले केही दिन बढ्न सक्छ।'
यसका बाबजुद अधिकांश लगानीकर्ताको उद्देश्य मूल्य उतारचढावबाट नै फाइदा लिने हुन्छ। दिनदिनै दस प्रतिशत बढेपछि कारोबारी सक्रिय हुनु नौलो होइन। तर हल्लाकै भरमा कारोबारीको 'ट्र्याप' मा साना लगानीकर्ता फस्न सक्ने भएकाले उनीहरू सजग हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ७, २०७७, ०२:३३:००